Cuntada: Sidee Website-yada ugu Qaadi Doontaa Qaybtaada Shakhsi ahaaneed
Haddii aad haysato shirkad halis ah, ganacsi dhexdhexaad ahama qayb ka mid ah xayeysiis ah oo ku dhex jira urur weyn, wacyigelinta nooca ayaa sidoo kale muhiim u ah koritaankaagawuxuu noqon lahaa lagama maarmaan u ah shirkad kasta oo weyn. Waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso in la dhisayo wacyigelinta noocaaga hadda waa qashinkhayraadka, sababtoo ah waxaad tahay ganacsade ama milkiilaha shirkadaha iskiis u shaqeysta laakiin tani waa mid soo horjeedaee runta ah. Michael Brown oo ka socda Semt Adeegyada Dijitaalka ayaa la wadaagaya fikrada ah sida tafaftirka online u noqon doonowaxay kor u qaadeysaa aragtidaada iyo horumarinta ganacsiga kobcinta
Dhisidda astaanka ayaa muhiim u ah sameynta xiriirmacaamiisha. Dadku waxay u sheegaan dadka kale waayo-aragnimada wanaagsan, sidaas darteed afka-afka-faafa oo kobciyahorumarinta ganacsiga. Weynaanta ayaa kaa dhigi doonta ganacsigaada weyn, iyo, laga yaabee, waxaad ka heli doontaa dareenka warbaahinta.
Dhammaan adigaa iska leh. Sida aasaasiga shirkadda, adigawaa madaxa iyo wajiga ururka. Ganacsigaagu wuxuu noqon karaa mid aad iyo aad u guulaystay markaad rabto. QaarkoodDadku waxay ku riyoonayaan noocan ah guusha noocan ah, halka shakhsiyaadka kale ay door bidaan in ay shirkadoodu yaraadaan oo la maamuli karo. Midkoodhabka ugu weyn ee lagu hirgelin karo calaamad la aqoonsan karo waa macaamiishu waxay la xiriiri doonaan adeegyadaada ama alaabadaadaadiga oo ah qof ahaan.
Ka feker shakhsiyado farabadan, oo markii hore bilaabay yar yar,waxay kor u kaceen xagga sare iyagoo dhisaya calaamad adag. Ka feker Colonel Harland Sanders ee KFC, oo ah digaag roodhida lehoo bilaabay kafeega yar ee Kentucky ee U..S. Sannadkii 1930-kii, kadibna wuxuu balaariyay UK iyo Ireland sanadkii 1965oo ka mid ah waxa ay noqdeen xayawaan weyn. Hase yeeshee, qofka dhabta ah ee ka danbeeya, "Koofiyoole" waa wajiga iyo gadaasha shirkadda.Natiijada, Kantaroolka KfC waa mid aad u guuleysata sababtoo ah badeecad sare, shakhsiyad gaar ah, kalsooniballanqaadyo iyo dammaanad. Waxaa intaa dheer, xeeladahooda 'Finger Lickin' Good 'ayaa macneheedu yahay xasuustii la xasuusto ee dadka ku dhexjirta.
Sidee ayaad u kordhin kartaa astaantaada shakhsiyeed adigoo abuuraya astaanta xooggan?
Isla markiiba toos ula hadal sheekooyinka xooggan iyo astaanta.Adigoo isticmaalaya erayo yar oo kaliya, waa inaad gudbisaa farriinta waxa ganacsigaagu u taagan yahay.
Maalmahan, qof kasta ayaa samayn kara website ah oo ka dhigayashirkadu waxay u muuqataa mid ka weyn tan dhab ahaantii. Mararka qaar taasi waa wax fiican, iyada oo ku xidhan haddii aad bixiso alaabo ama adeegyo.Baro tartamadaada iyo istiraatiijiyadaha kala duwan, ka dibna qor qori dhawr siyaabood oo aad uga bixi kartid.
Abuuritaanka astaanta internetka si aad u qaaddid astaantaada waxaa lagu sameyn karaa:
Abaabulka iyo xayeeysiinta
Qalabka caawinta muuqaalka -sawirro ama sawirro, sawiro
ololeyaal wargalin iyo wargeysyo
Xadhiga qatarta ah
Taageero sare iyo isgaadhsiin
Branding waa istaraatiijiyad. Waa habka laguu sheegi karomacaamiisha in adeeggaaga ama alaabtaada ay ku habboon yihiin isticmaalka. Branding online waxay u baahan tahay hab joogto ah. Isku-dubaridka muuqaalkaiyo waayo-aragnimada caadiga ah ee lagu soo bandhigay internetka waxay ka tarjumaysaa wejigaaga sida shirkad offline ah Source . Sida ganacsadaha ama milkiilaha ganacsiga yaryar,waxaad ka heli doontaa faa'iido u leh suuqa ganacsiga adoo hoos imanaya magaca calaamad la aqoonsan karo